စကီ လေးဖျော – My Blog
သဲစုတို့အဆောငျက ဝနျထမျးတှခေညျြ့ ဖွဈသညျ။ ဌာနပေါငျးစုံကဖွဈပွီး ပညာရေးဝနျထမျးဆိုလို့ သဲစုတဈယောကျထဲပါသညျ။ လူပေါငျး၄၀ကြျောမှာ သူ့အုပျစုနှငျ့သူဖွဈသညျ။ သဲစုက ရှယျတူအကောကျခှနျက ဒုအကောကျခှနျမှူး စိမျ့ရယျ စီမံကိနျးက ဖွူရယျ ဘဏ်ဍာအခှနျက သူသူရယျ လေးယောကျက တဈတှဲဖွဈသညျ။ အနကွောတော့လညျး ညီအဈမအရငျးတှလေို ဖွဈနသေညျ။ ဒီနကေ့ ရုံးပိတျရကျမို့ သဲစုနဲ့ စိမျ့အခနျးမှာ လေးယောကျစုမိပွီး ရောကျတတျရာရာတှေ ပွောရငျး စိမျ့ကသူ့ဘဲနဲ့ ခြိမျးတှတေဲ့အကွောငျးကို ပွောပွနသေညျ။
စိမျ့က.. “သူက အရမျးဆိုးတာဟဲ့နှဈယောကျထဲဆိုတော့သူကဲခငျြတိုငျး ကဲတာပေါ့ဟာ” ဆိုစသညျ။ သူသူက “ဘယျလိုကဲတာလဲငါတို့သိအောငျ ပွောပွလေ” ဆိုတော့ အားလုံးက စိတျဝငျတစား နားထောငျနသေညျ။ စိမျ့က “နငျတို့မို့ ပွောပွမှာနျော” ဆိုရပျထားတော့ အားလုံးက”အေးပါဟယျ”ဆိုပွီး ပွိုငျတူပွောကွသညျ။ စိမျ့က “သူက ငါ့နှုတျခမျးကိုမရမက နမျးတာဟနောကျသူ့လကျကွီးကလညျးငါနို့တှကေို ကိုငျတာ” ဆိုရငျး ခနရပျပွီး.. “ငါလညျး ထူပူသှားတာပေါ့ဟာ ပွီး” ဆိုရပျထားလို့ သဲစုက စိတျမရှညျဘဲ “ပွောလဟောနငျမခနျြဘဲပွော” လို့ဝငျပွောသညျ။
အဲ့ဒီကမြှ စိမျ့က “ဇာတျလမျးက ဒီလိုဟ” ရုံးပိတျရကျဆို နပွေညျတျောက ပွငျးဘို့ကောငျးသညျ။ စိမျ့တို့လြှောကျလညျလှနျးလို့ လညျစရာနရောကလညျး မရှိတော့။ သူ့ဘဲ ကိုစိုးက ရမညျးသငျးဘကျကို သှားလညျဘို့ပွောလို့ စိမျ့ဆိုကျကယျနောကျကနေ လိုကျသှားသညျ။ ဗုဒ်ဓဂါယာဘုရားကို ခနဝငျဖူးပွီး တပျကုနျးကို ဖွတျကာ ရမညျးသငျးရောကျသညျ။ ရမညျးသငျး တရုတျဆိုငျမှာ ထမငျးစားပွီးမှ စိမျ့ဒုက်ခ တှတေ့ော့သညျ။ ဗိုကျနာပွီး အိမျသာဝငျခငျြလာသညျ။ ဆိုငျမှာသှားဘို့ကလညျး ဂငျြးဘောငျးဘီရှညျနဲ့မို့ မဖွဈ။ ကိုစိုးအစီအစဉျနဲ့ ဟျောတယျမှာ အခနျးတဈခနျးငှားပွီး ကိစ်စရှငျးလိုကျရသညျ။
စိမျ့ပွနျထှကျလာတော့ ကိုစိုးက ကုတငျပျေါမှာ မိနျ့မိနျ့ကွီးထိုငျနသေညျ။ ပွီးတော့… ”လာလေ ဒီမှာခနျထိုငျအုံး” လို့ပွောသညျ။ စိမျ့ထိုငျလိုကျစဉျမှာဘဲ ကိုစိုးက စိမျ့ကိုဖကျပွီး နှုတျခမျးကို အတငျးနမျးတော့သညျ။ စိမျ့လညျး ဒီလိုမကွုံဘူးတာမို့ ထူပူသှားသညျ။ ပထမတော့ ရုံးနမေိပမေဲ့ နောကျပိုငျး ရငျတှခေုနျလာပွီး ငွိမျသှားသညျ။ ကိုစိုးက စိမျ့ငွိမျသှားတော့ တဆငျ့တကျပွီး နို့တှကေို ကိုငျတော့သညျ။ စိမျ့ရုနျးပမေဲ့ မရပါ။ စိမျ့ခေါငျးမူးသလိုလို အံခငျြသလိုလို ဖွဈနပေမေဲ့ ရငျတှပေိုခုနျလာပွီး နတျပူးသလို တုနျရီကာ ဖျေါပွမရတဲ့ခံစားမှုတဈမြိုး ခံစားလာခဲ့ရသညျ။ စိမျ့တဈခကျြသိလိုကျရတာကတော့ အဖုတျက စိုလာတာဘဲဖွဈသညျ။ ရာသီလာပွီးတာမှ သုံးလေးရကျရှိသေးတာမို့ အဖုတျက ထှကျလာတာတဲ့အရညျမှနျး သိလိုကျသညျ။ ရငျထဲမှာ လှိုကျပွီးမောလာလို့.. “မောငျရယျ စိမျ့အရမျးမောတာဘဲကှာ” လိုပွောလညျး ဆကျနမျးနပွေီး နို့တှကေို ဆကျနယျနသေညျ။
ကိုစိုးက အကြီကွယျသီးတှေ ဖွုတျနတောသိပမေဲ့ စိမျ့မညငျးမိ။ “အိုမောငျရယျ အဟငျ့ စိမျ့ငိုလိုကျမှာနျော အဟငျ့”. နဲ့စိမျ့ကွကျသီးတှထေကာ တှနျ့လိမျနရှောသညျ။ ကိုစိုးက စိမျ့နို့တှကေို လြာနဲ့ယကျပွီး နို့သီးခေါငျးလေးကိုစို့ကာ လြာနဲ့ ထိုးပေးနလေို့ ဖွဈသညျ။ စိမျ့တဟီးဟီးနဲ့ ငိုခလြိုကျတော့သညျ။ အဲ့ဒီကတြော့လညျး ကိုစိုး ပွူးပွာပွီး အတငျခြော့သညျ။ အမှနျကတော့ စိတျဆိုးပွီး ငိုခွငျးမဟုတျ။ မိနျးမတခြို့က ဖီးလျတကျကာစမှာ ဒီလိုဘဲ ငိုတတျတယျဆိုတာကို ကိုစိုး မသိခွငျး ဖွဈသညျ။ ကိုစိုးကလညျး ကွောကျပွီး ငွိမျသှားသညျ။ စိမျ့ကလညျးဆကျပွီး လုပျစခေငျြနသေညျ။ ဒါကွောငျ့ စိမျ့က သူ့အကြီတှကေို အပျေါပိုငျးဗလာဖွဈအောငျ ခြှတျပွီး.. “မောငျလုပျခငျြတယျဆိုလညျး လုပျ စိမျ့က မောငျ့အတှကျ အရုပျပါ” လို့ပွောလိုကျသညျ။ ကိုစိုးကွောငျကွညျ့နတေုံး… “လုပျလမေောငျ-ခုမှကွညျ့မနနေဲ့” ဆိုစိမျ့က ထရပျပွီး ကိုစိုးပါးစပျနား နို့ကိုထိုးပေးလိုကျသညျ။
“အိုကိုစိုးရယျစိမျ့တအားခဈြတယျ” ဆိုတော့ ကိုစိုးလကျက စိမျ့ပေါငျခှကွားဆီရောကျပွီး ပှတျပေးနပွေနျသညျ။ ဂငျြးဘောငျးဘီထူတာတောငျ စိမျ့အကွောစိမျ့အောငျ ကောငျးနသေညျမို့ ပိုထိအောငျ ပေါငျကို မသိမသာ ကားပေးလိုကျသညျ။ စိမျ့ကိုယျတိုငျ စိတျပါလာနပွေီမို့ ကိုစိုးလုပျသမြှ ကွနေပျစှာနဲ့ ခံတော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတော့သညျ။ စိမျ့က ကိုစိုးအကြီကွယျသီးတှကေိုဖွုပွီး ခြှတျပေးနသေညျ။ စှပျကယျြကို ကိုစိုးက သူ့ဖာသူခြှတျသညျ။ ကုတငျပျေါထိုငျနတေဲ့ ကိုစိုးက စိမျ့ဂငျြးဘောငျးဘီကို ခြှတျဖို့လုပျတော့… “စိမျ့ကိုယျ့ ဖာသာကိုယျရခြေိုးခနျးထဲ သှားခြှတျလိုကျမယျ” လို့ပွောလိုကျသညျ။
စိမျ့ရခြေိုးခနျးထဲက သဘကျကွီးကို ရငျလြားစီးပွီး ပွနျထှကျလာတော့ ကိုစိုးလညျး သဘကျကွီးကို ခါးမှာစီးထားသညျ။ ပေါငျနှဈလုံးကွားမှာ တနျးတနျးမတျမတျကွီး ငေါထှကျနတောကို စိမျ့တှပွေီ့း မကျြနှာက နီရဲသှားသညျ။ အပြိုစငျလေးမို့ တခါမှ မကွုံဘူးတဲ့ကိစ်စကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖွတျသနျးဖို့ ကွိုးစားတော့မညျဖွဈသညျ။ ကုတငျပျေါကို နှဈယောကျဖကျပွီး လှဲခလြိုကျသညျ။ ကိုစိုးနှုတျခမျးကို နမျးစုပျတော့ စိမျ့လညျး သူလိုဘဲ ပွနျစုပျနမျးလိုကျသညျ။ ကိုစိုးက သဘကျကိုဖွပွေီး နို့တှကေိုပှတျနသေညျ။
ထူးကဲတဲ့ခံစားမှုကွောငျ့ စိမျ့ညီးသံတိုးတိုးလေးထှကျသှားသညျ။ ကိုစိုးလကျက ပေါငျကွားကိုရောကျပွီး စောကျဖုတျကို ဖွေးဖွေးလေးပှတျပွနျတော့ စိမျ့ကော့တကျပွီး… “အီးဟီး- မောငျရယျအီး အီး” နဲ့ကယျြလောငျစှာ ညီးသံထှကျလာတော့သညျ။ “အိုမောငျမလုပျပါနဲ့အီးညဈပတျတယျမောငျအီး” နဲ့ကိုစိုးဘာဂြာကို စိမျ့ခံနရေပွီဖွဈသညျ။ သူ ကိုစိုးကို အားနာပမေဲ့ ကောငျးလှနျးပွနျတော့လညျး သူမတားဘဲ ခံနလေိုကျတော့သညျ။ စိမျ့အသိတှေ လှတျသှားသညျ။ စောကျဖုတျပျေါက ကိုစိုးလြာကွောငျ့ သူအကောငျးဆုံးအဆငျ့သို့ တကျလှမျးနမေိသညျ။ ဒိထကျဒိထကျ ကောငျးတာတှေ သူထပျရအုံးမှာကို မြှျောလငျ့ရငျး ကိုစိုးအပျေါ ခဈြသထကျပိုခဈြသှားမိသညျ။ သဲစုတို့ နားထောငျကောငျးနတေုံး ဝငျရောကျနှောကျယှကျသူကတော့ မမထား(ခ) ဒျေါထားကွညျ ဖွဈသညျ။ အဆောငျမှာ အသကျအကွီးဆုံး အပြိုကွီးလညျး ဖွဈသညျ။
သူက ရုံးအုပျမကွီးပွီပွီ.. “ဟဲ့ကောငျမလေးတှေ စန်ဒွလာတော့မှာ မကွညျ့ဘူးလား” လို့ဝငျပွီးလာပွောလို့ ဇာတျလမျးက ရပျသှားရသညျ။ ဒျေါထားကွညျ ထှကျသှားတော့ သူသူက… “ဇာတျလမျး ဆကျလဟေယျငါတောငျ အရညျစိမျ့နပွေီ” လို့ပွောတော့ အားလုံးဝိုငျရယျပွီး ဖွူက “ဘာဂြာလဟေယျ” လို့ပွောသညျ။ စိမျ့တဈယောကျလေ ထဲဘဲမွောကျသှားသလို ဂြောကျတဲဘဲ ပွုတျကသြလို ရငျထဲအေးကနဲ အကွိမျကွိမျဖွဈနရေသညျ။ အဲကှနျး အခနျးထဲမှာတောငျ စိမျ့ခြှေးတှပွေနျနရှောသညျ။ ကိုစိုးကလညျး ဘာဂြာကို ရှယျကိုမှုတျပေးနတေော့ စိမျ့ တအီးအီးနဲ့ ရမျးခါနသေညျ။ စိမျ့တဈယောကျ ကာမအထှဋျအထိပျသို့ အကွိမျကွိမျရောကျနရေသညျ။ “တျောပွီမောငျတျောပွီစိမျ့ခေါငျးတှေ အရမျးမူးလာပွီ” ဆိုပွီး စိမျ့ ကိုစိုးကို တားလိုကျရသညျ။ ခဏမှိနျးပွီး စိမျ့မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့တော့ ဘေးမှာလာလှဲနတေဲ့ ကိုစိုးလီးကွီးက မိုးပျေါထောငျမတျနသေညျ။
ကိုစိုးက စိမျ့လကျကို အသာဆှဲယူပွီးလီးကွီးကို ကိုငျကွညျ့ခိုငျးသညျ။ ပူနှေးပွီး သှေးကွောတှကေ လှုပျနတေော့ စိမျ့ အသဲတယားယား ဖွဈနခေဲ့ရသညျ။ ကိုစိုးက “စိမျ့ မောငျ့လီးကို ပွနျစုပျပေးပါလား” လို့ပွောလာသညျ။ စိမျ့တကွိမျတခါမှလညျး မလုပျဘူး။ ရှံကလညျး ရှံနသေညျ။ ပွီးမှ ကိုစိုးတောငျ မရှံမရှာ ငါ့စောကျဖုတျ ကိုငျတာဘဲလလေို့ ဖွသေိမျ့ပွီး ထထိုငျကာ လီးကွီးကို စုပျပေးလိုကျသညျ။ ကိုစိုးက တျောတျောကွာအောငျ စုပျခိုငျးပွီးမှ… “ကိုစိုး- လုပျခငျြတယျကှာ” လို့ပွောလာသညျ။ စိမျ့လညျး စူးစမျးခံတဲ့ အနနေဲ့ “အငျး” လို့ခှငျ့ပွုလိုကျသညျ။ ပွီးမှ “နာမှာလား မသိ”လို့ပွောတော့- ကိုစိုးက “ပထမတော့နဲနဲနာခငျြနာမှာပေါ့” လို့ပွောပွီး စိမျ့အပျေါ တကျခှသညျ။ ကိုစိုး တကျခှကတညျးက စိမျ့ ရငျတှအေခုနျ မွနျသှားရသညျ။ ဟောဝငျလာပါပွီ။ စိမျ့ အာရုံကို စုစညျးပွီး ခံကွညျ့နတေော့ စောကျဖုတျထဲ ခြောကနဲ ဝငျလာတဲ့လီးကွီးကွောငျ့ ဖျေါပွမရတဲ့အရသာကို သိလိုကျသညျ။ သူခန်ဓာကိုယျပျေါ တကျခှထားတဲ့ ကိုစိုးရဲ့မကျြနှာကိုပငျ သူ မကွညျ့ဖွဈခဲ့ပါ။ “ဘှတျ ဘတျ ဘှတျ ဘတျ ဘှတျ ဘတျ” နဲ့ဆောငျ့သံတှနေဲ့အတူ စိမျ့ညီးသံတှကေ ရောနှောနသေညျ။ ကိုစိုးလညျး ဆောငျ့ကောငျးကောငျးနဲ့ ဆကျတိုကျမနားတမျး ဆောငျ့နသေညျ။
“အားမောငျရယျ-အဟငျ့မောငျရယျအိုမောငျရယျ” ညီးအပွီးမှာတော့ “အီး…..” ဆိုတဲ့ညီးသံရှညျကွီးနဲ့ စိမျ့ ကော့တကျသှားတော့သညျ။ မမနေို့ငျစရာ ထာဝရ တပျမကျစတေဲ့ ထာဝရ တောငျ့တနရေမဲ့ ကာမပနျးတိုငျကို ရောကျခဲ့ရသညျ။ သောကျလသေောကျလေ ငတျမပွတေဲ့ ကာမအရသာကို စိမျ့ခံစားလိုကျရသညျ။ “ဟယျမိစိမျ့ရယျနငျ့ဇာတျလမျးကအရမျးကောငျးတာဘဲနျောငါတောငျ နငျ့လို ဖွဈခငျြလာပွီ” လို့ သူသူက ဝငျပွောပွီး.. “ငါတော့ အိမျသာ ပွေးပွီဟေ့” ဆိုကာ ပွေးတော့သညျ။ သဲစုရယျ စိမျ့ရယျ ဖွူတို့က တဝါးဝါး ရီကနျြခဲ့သညျ။ ၅-မိနဈလောကျနေ သူသူပွနျလာပွီး… “စိမျ့ဇာတျလမျးက ကောငျးလှနျးလို့ ငါမနနေိုငျတော့ဘူးလဟော” ဆိုပွီး နဖူးကခြှတှေကေို လကျနဲ့သပျခနြလေသေညျ။ စိမျ့က “ငါကတော့ငါ့ဇာတျလမျးကိုအမှနျအတိုငျးပွောပွီးပွီ ဇာတျလမျးရှိတဲ့သူတှေ ပွောအုံး” လို့ဆိုသညျ။ သူသူကလညျး “အေးဟယျ-ပွောကွအုံးငါနောကျတဈခေါကျမှအဆငျပွမှော” လို့ပွောလို့ ကနျြလူတှရေီ ကွလိုကျသညျ။
သဲစုက”ငါဆယျတနျးတုံးကပေါ့ဟာငါ့အဈကိုနှဈဝမျးကှဲဆေးကြောငျးသားဆီမှာဂိုကျတကျရတယျငါက ဆယျတနျးထဲကအခုလို ကိုယျလုံးဘဲလဘေဲတှခေိုကျတဲ့ကိုယျလုံးပေါ့ဟာ” လို့ဆိုသညျ။ သူသူက စိတျမရှညျသံ”ဟုတျပါပွီမငျသမီးရယျ-စပါတော့” လို့ပွောသညျ။ “သဲစုက စာတှအေတျောရတာဘဲဂုဏျထူးတှတေောငျ ရမှာ” လို့ ကိုကိုဆနျနီကပွောသညျ။ သဲစုလေးလညျး ဘဝငျ့မွငျ့သှားသညျ။ ပွီးတော့ ခေါငျးလေးကို ကိုငျကာ… “ငါ့ညီမ ရီးစားထားပွီလား” လို့မေးသညျ။ သဲစုက နှုတျခမျးစူပွီး “မထားပါဘူးကိုကိုကလဲ” ဆိုတော့.. ကိုကိုဆနျနီက “မထားနဲ့ ဆကျ ဆိုတာကကိုယျ့ဖာကိုယျ ဖနျတီးယူလို့ရတယျ အပြိုရေ ဆိုတာကို အဲ့လိုနညျးနဲ့ထိနျး” ပွောတော့ သဲစုနားရှုပျသှားသညျ။
ကိုကိုဆနျနီက ဆကျပွီး.. “ညီမ ရောလုပျတတျပွီလား” လို့ ဆကျမေးတော့ သဲစုပို ရှုပျသှားသညျ။ ဒါကိုသိလို့ ကိုကိုဆနျနီက.. “ယောကျြားနဲ့မိနျးမတှေ ဆကျ စိတျထလာရငျ-ကိုယျ့ဖာသာကိုယျအာသာ ဖွတောလေ” လို့ပွောသညျ။ သဲစုက “ကွားဘူးတယျကိုကိုဒါမဲ့ သဲစု မတတျဘူး” လို့ပွောလိုကျသညျ။ “ငါ့ညီမကအပြိုတောငျဖွဈနပွေီမတတျဘူးဆိုတော့ ညံ့တာပေါ့” လို့ ထပျပွောသညျ။ သူကဆေးကြောငျး နောကျဆုံးနှဈမို့ ဒီကိစ်စက ရှကျစရာမဟုတျဘူးလို့ ထပျပွောပွီး တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ဘဲ အကိုသငျပေးမယျလို့ ပွောသညျ။ ပွီးထလာပွီး သဲစုနောကျကနေ ထမီထဲ လကျသြှိုသှငျးကာ အသာအယာပှတျပွရငျး ဒါကဘာ ဒါကဘာဆို အင်ျဂလိပျလို အချေါအဝျေါတှေ ပွောနသေညျ။ သဲစုနားက မကွားတခကျြ ကွားတခကျြနဲ့ တရှီးရှီးသာ ညီးနရေတော့သညျ။ “အီးဟီးယီးကိုကိုရယျတအားကောငျးသှားပွီ” ဆိုနတျပူးသလိုတုနျနသေညျ။
သူလကျကို သဈရှုးစနဲ့သုတျနပွေီး “ကိုကိုပွောတာအဲ့ဒါဘဲရီးစားထားရငျနောကျဆကျတှဲပွဿနာပျေါနိုငျတယျဒီနညျးက ဘယျသူမှလညျးမသိဘူးမှတျထားနျော” လို့ ပွောသညျ။ သဲစုတကယျကောငျးတဲ့အရသာမို့ သူပွောနတောတောငျ ကောငျးကောငျးမကွားမိလိုကျပါ။ ပွီးသူက ပုဆိုးကိုဖွခေပြွီး လကျနဲ့လီးကို ဆောငျ့ပွရငျး ယောကျြားတှကေတြော့ အဲ့လိုလုပျတာ ဆိုပွသညျ။ “ငါလညျး အဲ့ဒီကတညျးကအာသာဖွလေုပျတတျသှားတာဟ”လို့ သဲစုကပွောသညျ။ သူသူက”နငျကလဲတုံးပဟယျငါဆို ၈ တနျးကတညျးကလုပျတတျနပွေီ” လို့ပွောလို့.. ဖွူက “နှာဘူးမ” ဆိုဝငျပွောသညျ။ သူသူက “ဟူတျဘူးလဟေယျဒါကွောငျ့ငါ့ရီးစားအကွောမခံရတာပေါ့” လို့ ရငျကော့ပွရငျး ပွောသညျ။ စိမျ့က “နပေါအုံး သဲစုရဲ့အဲ့ဒီနငျ့အဈကို နှဈဝမျးကှဲကနငျ့ကိုလုပျခငျြတယျ မပွောဘူးလား” လို့မေးသညျ။
သဲစုက”ဝေးသေး အဲ့ဒီနကေ့သငျပေးရုံဘဲနောကျ သူမဟုတျသလိုဘဲဟ” လို့ပွောသညျ။ ဖွူကလညျး “နငျ့အကိုက-ဆေးကြောငျးသား ဆိုတော့ဆေးအ ကွောငျးနဲ့ဘဲ ယှဉျပွီးသငျတာ ဖွဈမှာပေါ့နော” လို့ဝငျပွောသညျ။ သူသူက “သဲစုနငျ့ဇာတျလမျးကဒါဘဲဆိုတော့ငါအိမျသာ မပွေးရတော့ဘူး” ဆိုပွောလို့ ဝိုငျးရီပွီး စိမျ့က”နငျ့ဖုနျးထဲကအောကားကွညျ့ပွီး သှားပှတျပေါ့ဟာ” လို့ပွောသညျ။ သူသူက “စိမျ့ရယျကွညျ့လှနျလို့ထပျသလဲလဲဖွဈနလေို့ဖီးလျမလာပါဘူး ဟယျ” လို့ ပွောလိုကျသညျ။ “ကဲပါ နငျ့ဖုနျဇာပွာဖှငျ့လိုကျ-ငါခိုးရိုကျကားတှဒေေါငျးထားတယျ-ပေးမယျ” လို့ ဖွူကပွောပွီး ကူးပေးလိုကျတော့သညျ။ မိနျမပြိုတှစေုမိတိုငျးလညျး ယောကျြားတှအေတိုငျး ပါလားနျော။
သဲစုတို့အဆောင်က ဝန်ထမ်းတွေချည့် ဖြစ်သည်။ ဌာနပေါင်းစုံကဖြစ်ပြီး ပညာရေးဝန်ထမ်းဆိုလို့ သဲစုတစ်ယောက်ထဲပါသည်။ လူပေါင်း၄၀ကျော်မှာ သူ့အုပ်စုနှင့်သူဖြစ်သည်။ သဲစုက ရွယ်တူအကောက်ခွန်က ဒုအကောက်ခွန်မှူး စိမ့်ရယ် စီမံကိန်းက ဖြူရယ် ဘဏ္ဍာအခွန်က သူသူရယ် လေးယောက်က တစ်တွဲဖြစ်သည်။ အနေကြာတော့လည်း ညီအစ်မအရင်းတွေလို ဖြစ်နေသည်။ ဒီနေ့က ရုံးပိတ်ရက်မို့ သဲစုနဲ့ စိမ့်အခန်းမှာ လေးယောက်စုမိပြီး ရောက်တတ်ရာရာတွေ ပြောရင်း စိမ့်ကသူ့ဘဲနဲ့ ချိမ်းတွေ့တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြနေသည်။
စိမ့်က.. “သူက အရမ်းဆိုးတာဟဲ့နှစ်ယောက်ထဲဆိုတော့သူကဲချင်တိုင်း ကဲတာပေါ့ဟာ” ဆိုစသည်။ သူသူက “ဘယ်လိုကဲတာလဲငါတို့သိအောင် ပြောပြလေ” ဆိုတော့ အားလုံးက စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေသည်။ စိမ့်က “နင်တို့မို့ ပြောပြမှာနော်” ဆိုရပ်ထားတော့ အားလုံးက”အေးပါဟယ်”ဆိုပြီး ပြိုင်တူပြောကြသည်။ စိမ့်က “သူက ငါ့နှုတ်ခမ်းကိုမရမက နမ်းတာဟနောက်သူ့လက်ကြီးကလည်းငါနို့တွေကို ကိုင်တာ” ဆိုရင်း ခနရပ်ပြီး.. “ငါလည်း ထူပူသွားတာပေါ့ဟာ ပြီး” ဆိုရပ်ထားလို့ သဲစုက စိတ်မရှည်ဘဲ “ပြောလေဟာနင်မချန်ဘဲပြော” လို့ဝင်ပြောသည်။
အဲ့ဒီကျမှ စိမ့်က “ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုဟ” ရုံးပိတ်ရက်ဆို နေပြည်တော်က ပြင်းဘို့ကောင်းသည်။ စိမ့်တို့လျှောက်လည်လွန်းလို့ လည်စရာနေရာကလည်း မရှိတော့။ သူ့ဘဲ ကိုစိုးက ရမည်းသင်းဘက်ကို သွားလည်ဘို့ပြောလို့ စိမ့်ဆိုက်ကယ်နောက်ကနေ လိုက်သွားသည်။ ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားကို ခနဝင်ဖူးပြီး တပ်ကုန်းကို ဖြတ်ကာ ရမည်းသင်းရောက်သည်။ ရမည်းသင်း တရုတ်ဆိုင်မှာ ထမင်းစားပြီးမှ စိမ့်ဒုက္ခ တွေ့တော့သည်။ ဗိုက်နာပြီး အိမ်သာဝင်ချင်လာသည်။ ဆိုင်မှာသွားဘို့ကလည်း ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်နဲ့မို့ မဖြစ်။ ကိုစိုးအစီအစဉ်နဲ့ ဟော်တယ်မှာ အခန်းတစ်ခန်းငှားပြီး ကိစ္စရှင်းလိုက်ရသည်။
စိမ့်ပြန်ထွက်လာတော့ ကိုစိုးက ကုတင်ပေါ်မှာ မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်နေသည်။ ပြီးတော့… ”လာလေ ဒီမှာခန်ထိုင်အုံး” လို့ပြောသည်။ စိမ့်ထိုင်လိုက်စဉ်မှာဘဲ ကိုစိုးက စိမ့်ကိုဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို အတင်းနမ်းတော့သည်။ စိမ့်လည်း ဒီလိုမကြုံဘူးတာမို့ ထူပူသွားသည်။ ပထမတော့ ရုံးနေမိပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ရင်တွေခုန်လာပြီး ငြိမ်သွားသည်။ ကိုစိုးက စိမ့်ငြိမ်သွားတော့ တဆင့်တက်ပြီး နို့တွေကို ကိုင်တော့သည်။ စိမ့်ရုန်းပေမဲ့ မရပါ။ စိမ့်ခေါင်းမူးသလိုလို အံချင်သလိုလို ဖြစ်နေပေမဲ့ ရင်တွေပိုခုန်လာပြီး နတ်ပူးသလို တုန်ရီကာ ဖေါ်ပြမရတဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုး ခံစားလာခဲ့ရသည်။ စိမ့်တစ်ချက်သိလိုက်ရတာကတော့ အဖုတ်က စိုလာတာဘဲဖြစ်သည်။ ရာသီလာပြီးတာမှ သုံးလေးရက်ရှိသေးတာမို့ အဖုတ်က ထွက်လာတာတဲ့အရည်မှန်း သိလိုက်သည်။ ရင်ထဲမှာ လှိုက်ပြီးမောလာလို့.. “မောင်ရယ် စိမ့်အရမ်းမောတာဘဲကွာ” လိုပြောလည်း ဆက်နမ်းနေပြီး နို့တွေကို ဆက်နယ်နေသည်။
ကိုစိုးက အကျီကြယ်သီးတွေ ဖြုတ်နေတာသိပေမဲ့ စိမ့်မညင်းမိ။ “အိုမောင်ရယ် အဟင့် စိမ့်ငိုလိုက်မှာနော် အဟင့်”. နဲ့စိမ့်ကြက်သီးတွေထကာ တွန့်လိမ်နေရှာသည်။ ကိုစိုးက စိမ့်နို့တွေကို လျာနဲ့ယက်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကိုစို့ကာ လျာနဲ့ ထိုးပေးနေလို့ ဖြစ်သည်။ စိမ့်တဟီးဟီးနဲ့ ငိုချလိုက်တော့သည်။ အဲ့ဒီကျတော့လည်း ကိုစိုး ပြူးပြာပြီး အတင်ချော့သည်။ အမှန်ကတော့ စိတ်ဆိုးပြီး ငိုခြင်းမဟုတ်။ မိန်းမတချို့က ဖီးလ်တက်ကာစမှာ ဒီလိုဘဲ ငိုတတ်တယ်ဆိုတာကို ကိုစိုး မသ်ိခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုစိုးကလည်း ကြောက်ပြီး ငြိမ်သွားသည်။ စိမ့်ကလည်းဆက်ပြီး လုပ်စေချင်နေသည်။ ဒါကြောင့် စိမ့်က သူ့အကျီတွေကို အပေါ်ပိုင်းဗလာဖြစ်အောင် ချွတ်ပြီး.. “မောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်း လုပ် စိမ့်က မောင့်အတွက် အရုပ်ပါ” လို့ပြောလိုက်သည်။ ကိုစိုးကြောင်ကြည့်နေတုံး… “လုပ်လေမောင်-ခုမှကြည့်မနေနဲ့” ဆိုစိမ့်က ထရပ်ပြီး ကိုစိုးပါးစပ်နား နို့ကိုထိုးပေးလိုက်သည်။
“အိုကိုစိုးရယ်စိမ့်တအားချစ်တယ်” ဆိုတော့ ကိုစိုးလက်က စိမ့်ပေါင်ခွကြားဆီရောက်ပြီး ပွတ်ပေးနေပြန်သည်။ ဂျင်းဘောင်းဘီထူတာတောင် စိမ့်အကြောစိမ့်အောင် ကောင်းနေသည်မို့ ပိုထိအောင် ပေါင်ကို မသိမသာ ကားပေးလိုက်သည်။ စိမ့်ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါလာနေပြီမို့ ကိုစိုးလုပ်သမျှ ကြေနပ်စွာနဲ့ ခံတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်။ စိမ့်က ကိုစိုးအကျီကြယ်သီးတွေကိုဖြုပြီး ချွတ်ပေးနေသည်။ စွပ်ကျယ်ကို ကိုစိုးက သူ့ဖာသူချွတ်သည်။ ကုတင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့ ကိုစိုးက စိမ့်ဂျင်းဘောင်းဘီကို ချွတ်ဖို့လုပ်တော့… “စိမ့်ကိုယ့် ဖာသာကိုယ်ရေချိုးခန်းထဲ သွားချွတ်လိုက်မယ်” လို့ပြောလိုက်သည်။
စိမ့်ရေချိုးခန်းထဲက သဘက်ကြီးကို ရင်လျားစီးပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ကိုစိုးလည်း သဘက်ကြီးကို ခါးမှာစီးထားသည်။ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ တန်းတန်းမတ်မတ်ကြီး ငေါထွက်နေတာကို စိမ့်တွေ့ပြီး မျက်နှာက နီရဲသွားသည်။ အပျိုစင်လေးမို့ တခါမှ မကြုံဘူးတဲ့ကိစ္စကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြတ်သန်းဖို့ ကြိုးစားတော့မည်ဖြစ်သည်။ ကုတင်ပေါ်ကို နှစ်ယောက်ဖက်ပြီး လှဲချလိုက်သည်။ ကိုစိုးနှုတ်ခမ်းကို နမ်းစုပ်တော့ စိမ့်လည်း သူလိုဘဲ ပြန်စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ကိုစိုးက သဘက်ကိုဖြေပြီး နို့တွေကိုပွတ်နေသည်။
ထူးကဲတဲ့ခံစားမှုကြောင့် စိမ့်ညီးသံတိုးတိုးလေးထွက်သွားသည်။ ကိုစိုးလက်က ပေါင်ကြားကိုရောက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကို ဖြေးဖြေးလေးပွတ်ပြန်တော့ စိမ့်ကော့တက်ပြီး… “အီးဟီး- မောင်ရယ်အီး အီး” နဲ့ကျယ်လောင်စွာ ညီးသံထွက်လာတော့သည်။ “အိုမောင်မလုပ်ပါနဲ့အီးညစ်ပတ်တယ်မောင်အီး” နဲ့ကိုစိုးဘာဂျာကို စိမ့်ခံနေရပြီဖြစ်သည်။ သူ ကိုစိုးကို အားနာပေမဲ့ ကောင်းလွန်းပြန်တော့လည်း သူမတားဘဲ ခံနေလိုက်တော့သည်။ စိမ့်အသိတွေ လွတ်သွားသည်။ စောက်ဖုတ်ပေါ်က ကိုစိုးလျာကြောင့် သူအကောင်းဆုံးအဆင့်သို့ တက်လှမ်းနေမိသည်။ ဒိထက်ဒိထက် ကောင်းတာတွေ သူထပ်ရအုံးမှာကို မျှော်လင့်ရင်း ကိုစိုးအပေါ် ချစ်သထက်ပိုချစ်သွားမိသည်။ သဲစုတို့ နားထောင်ကောင်းနေတုံး ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်သူကတော့ မမထား(ခ) ဒေါ်ထားကြည် ဖြစ်သည်။ အဆောင်မှာ အသက်အကြီးဆုံး အပျိုကြီးလည်း ဖြစ်သည်။
သူက ရုံးအုပ်မကြီးပြီပြီ.. “ဟဲ့ကောင်မလေးတွေ စန္ဒြလာတော့မှာ မကြည့်ဘူးလား” လို့ဝင်ပြီးလာပြောလို့ ဇာတ်လမ်းက ရပ်သွားရသည်။ ဒေါ်ထားကြည် ထွက်သွားတော့ သူသူက… “ဇာတ်လမ်း ဆက်လေဟယ်ငါတောင် အရည်စိမ့်နေပြီ” လို့ပြောတော့ အားလုံးဝိုင်ရယ်ပြီး ဖြူက “ဘာဂျာလေဟယ်” လို့ပြောသည်။ စိမ့်တစ်ယောက်လေ ထဲဘဲမြောက်သွားသလို ဂျောက်တဲဘဲ ပြုတ်ကျသလို ရင်ထဲအေးကနဲ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေရသည်။ အဲကွန်း အခန်းထဲမှာတောင် စိမ့်ချွေးတွေပြန်နေရှာသည်။ ကိုစိုးကလည်း ဘာဂျာကို ရှယ်ကိုမှုတ်ပေးနေတော့ စိမ့် တအီးအီးနဲ့ ရမ်းခါနေသည်။ စိမ့်တစ်ယောက် ကာမအထွဋ်အထိပ်သို့ အကြိမ်ကြိမ်ရောက်နေရသည်။ “တော်ပြီမောင်တော်ပြီစိမ့်ခေါင်းတွေ အရမ်းမူးလာပြီ” ဆိုပြီး စိမ့် ကိုစိုးကို တားလိုက်ရသည်။ ခဏမှိန်းပြီး စိမ့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ ဘေးမှာလာလှဲနေတဲ့ ကိုစိုးလီးကြီးက မိုးပေါ်ထောင်မတ်နေသည်။
ကိုစိုးက စိမ့်လက်ကို အသာဆွဲယူပြီးလီးကြီးကို ကိုင်ကြည့်ခိုင်းသည်။ ပူနွေးပြီး သွေးကြောတွေက လှုပ်နေတော့ စိမ့် အသဲတယားယား ဖြစ်နေခဲ့ရသည်။ ကိုစိုးက “စိမ့် မောင့်လီးကို ပြန်စုပ်ပေးပါလား” လို့ပြောလာသည်။ စိမ့်တကြိမ်တခါမှလည်း မလုပ်ဘူး။ ရွံကလည်း ရွံနေသည်။ ပြီးမှ ကိုစိုးတောင် မရွံမရှာ ငါ့စောက်ဖုတ် ကိုင်တာဘဲလေလို့ ဖြေသိမ့်ပြီး ထထိုင်ကာ လီးကြီးကို စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ကိုစိုးက တော်တော်ကြာအောင် စုပ်ခိုင်းပြီးမှ… “ကိုစိုး- လုပ်ချင်တယ်ကွာ” လို့ပြောလာသည်။ စိမ့်လည်း စူးစမ်းခံတဲ့ အနေနဲ့ “အင်း” လို့ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ပြီးမှ “နာမှာလား မသိ”လို့ပြောတော့- ကိုစိုးက “ပထမတော့နဲနဲနာချင်နာမှာပေါ့” လို့ပြောပြီး စိမ့်အပေါ် တက်ခွသည်။ ကိုစိုး တက်ခွကတည်းက စိမ့် ရင်တွေအခုန် မြန်သွားရသည်။ ဟောဝင်လာပါပြီ။ စိမ့် အာရုံကို စုစည်းပြီး ခံကြည့်နေတော့ စောက်ဖုတ်ထဲ ချောကနဲ ဝင်လာတဲ့လီးကြီးကြောင့် ဖေါ်ပြမရတဲ့အရသာကို သိလိုက်သည်။ သူခန္ဓာကိုယ်ပေါ် တက်ခွထားတဲ့ ကိုစိုးရဲ့မျက်နှာကိုပင် သူ မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ “ဘွတ် ဘတ် ဘွတ် ဘတ် ဘွတ် ဘတ်” နဲ့ဆောင့်သံတွေနဲ့အတူ စိမ့်ညီးသံတွေက ရောနှောနေသည်။ ကိုစိုးလည်း ဆောင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်တိုက်မနားတမ်း ဆောင့်နေသည်။
“အားမောင်ရယ်-အဟင့်မောင်ရယ်အိုမောင်ရယ်” ညီးအပြီးမှာတော့ “အီး…..” ဆိုတဲ့ညီးသံရှည်ကြီးနဲ့ စိမ့် ကော့တက်သွားတော့သည်။ မမေ့နိုင်စရာ ထာဝရ တပ်မက်စေတဲ့ ထာဝရ တောင့်တနေရမဲ့ ကာမပန်းတိုင်ကို ရောက်ခဲ့ရသည်။ သောက်လေသောက်လေ ငတ်မပြေတဲ့ ကာမအရသာကို စိမ့်ခံစားလိုက်ရသည်။ “ဟယ်မိစိမ့်ရယ်နင့်ဇာတ်လမ်းကအရမ်းကောင်းတာဘဲနော်ငါတောင် နင့်လို ဖြစ်ချင်လာပြီ” လို့ သူသူက ဝင်ပြောပြီး.. “ငါတော့ အိမ်သာ ပြေးပြီဟေ့” ဆိုကာ ပြေးတော့သည်။ သဲစုရယ် စိမ့်ရယ် ဖြူတို့က တဝါးဝါး ရီကျန်ခဲ့သည်။ ၅-မိနစ်လောက်နေ သူသူပြန်လာပြီး… “စိမ့်ဇာတ်လမ်းက ကောင်းလွန်းလို့ ငါမနေနိုင်တော့ဘူးလေဟာ” ဆိုပြီး နဖူးကချွေတွေကို လက်နဲ့သပ်ချနေလေသည်။ စိမ့်က “ငါကတော့ငါ့ဇာတ်လမ်းကိုအမှန်အတိုင်းပြောပြီးပြီ ဇာတ်လမ်းရှိတဲ့သူတွေ ပြောအုံး” လို့ဆိုသည်။ သူသူကလည်း “အေးဟယ်-ပြောကြအုံးငါနောက်တစ်ခေါက်မှအဆင်ပြေမှာ” လို့ပြောလို့ ကျန်လူတွေရီ ကြလိုက်သည်။
သဲစုက”ငါဆယ်တန်းတုံးကပေါ့ဟာငါ့အစ်ကိုနှစ်ဝမ်းကွဲဆေးကျောင်းသားဆီမှာဂိုက်တက်ရတယ်ငါက ဆယ်တန်းထဲကအခုလို ကိုယ်လုံးဘဲလေဘဲတွေခိုက်တဲ့ကိုယ်လုံးပေါ့ဟာ” လို့ဆိုသည်။ သူသူက စိတ်မရှည်သံ”ဟုတ်ပါပြီမင်သမီးရယ်-စပါတော့” လို့ပြောသည်။ “သဲစုက စာတွေအတော်ရတာဘဲဂုဏ်ထူးတွေတောင် ရမှာ” လို့ ကိုကိုဆန်နီကပြောသည်။ သဲစုလေးလည်း ဘဝင့်မြင့်သွားသည်။ ပြီးတော့ ခေါင်းလေးကို ကိုင်ကာ… “ငါ့ညီမ ရီးစားထားပြီလား” လို့မေးသည်။ သဲစုက နှုတ်ခမ်းစူပြီး “မထားပါဘူးကိုကိုကလဲ” ဆိုတော့.. ကိုကိုဆန်နီက “မထားနဲ့ ဆက် ဆိုတာကကိုယ့်ဖာကိုယ် ဖန်တီးယူလို့ရတယ် အပျိုရေ ဆိုတာကို အဲ့လိုနည်းနဲ့ထိန်း” ပြောတော့ သဲစုနားရှုပ်သွားသည်။
ကိုကိုဆန်နီက ဆက်ပြီး.. “ညီမ ရောလုပ်တတ်ပြီလား” လို့ ဆက်မေးတော့ သဲစုပို ရှုပ်သွားသည်။ ဒါကိုသိလို့ ကိုကိုဆန်နီက.. “ယောကျာ်းနဲ့မိန်းမတွေ ဆက် စိတ်ထလာရင်-ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်အာသာ ဖြေတာလေ” လို့ပြောသည်။ သဲစုက “ကြားဘူးတယ်ကိုကိုဒါမဲ့ သဲစု မတတ်ဘူး” လို့ပြောလိုက်သည်။ “ငါ့ညီမကအပျိုတောင်ဖြစ်နေပြီမတတ်ဘူးဆိုတော့ ညံ့တာပေါ့” လို့ ထပ်ပြောသည်။ သူကဆေးကျောင်း နောက်ဆုံးနှစ်မို့ ဒီကိစ္စက ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ ထပ်ပြောပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဘဲ အကိုသင်ပေးမယ်လို့ ပြောသည်။ ပြီးထလာပြီး သဲစုနောက်ကနေ ထမီထဲ လက်သျှိုသွင်းကာ အသာအယာပွတ်ပြရင်း ဒါကဘာ ဒါကဘာဆို အင်္ဂလိပ်လို အခေါ်အဝေါ်တွေ ပြောနေသည်။ သဲစုနားက မကြားတချက် ကြားတချက်နဲ့ တရှီးရှီးသာ ညီးနေရတော့သည်။ “အီးဟီးယီးကိုကိုရယ်တအားကောင်းသွားပြီ” ဆိုနတ်ပူးသလိုတုန်နေသည်။
သူလက်ကို သစ်ရှုးစနဲ့သုတ်နေပြီး “ကိုကိုပြောတာအဲ့ဒါဘဲရီးစားထားရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာပေါ်နိုင်တယ်ဒီနည်းက ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးမှတ်ထားနော်” လို့ ပြောသည်။ သဲစုတကယ်ကောင်းတဲ့အရသာမို့ သူပြောနေတာတောင် ကောင်းကောင်းမကြားမိလိုက်ပါ။ ပြီးသူက ပုဆိုးကိုဖြေချပြီး လက်နဲ့လီးကို ဆောင့်ပြရင်း ယောကျာ်းတွေကျတော့ အဲ့လိုလုပ်တာ ဆိုပြသည်။ “ငါလည်း အဲ့ဒီကတည်းကအာသာဖြေလုပ်တတ်သွားတာဟ”လို့ သဲစုကပြောသည်။ သူသူက”နင်ကလဲတုံးပဟယ်ငါဆို ၈ တန်းကတည်းကလုပ်တတ်နေပြီ” လို့ပြောလို့.. ဖြူက “နှာဘူးမ” ဆိုဝင်ပြောသည်။ သူသူက “ဟူတ်ဘူးလေဟယ်ဒါကြောင့်ငါ့ရီးစားအကြောမခံရတာပေါ့” လို့ ရင်ကော့ပြရင်း ပြောသည်။ စိမ့်က “နေပါအုံး သဲစုရဲ့အဲ့ဒီနင့်အစ်ကို နှစ်ဝမ်းကွဲကနင့်ကိုလုပ်ချင်တယ် မပြောဘူးလား” လို့မေးသည်။
သဲစုက”ဝေးသေး အဲ့ဒီနေ့ကသင်ပေးရုံဘဲနောက် သူမဟုတ်သလိုဘဲဟ” လို့ပြောသည်။ ဖြူကလည်း “နင့်အကိုက-ဆေးကျောင်းသား ဆိုတော့ဆေးအ ကြောင်းနဲ့ဘဲ ယှဉ်ပြီးသင်တာ ဖြစ်မှာပေါ့နော” လို့ဝင်ပြောသည်။ သူသူက “သဲစုနင့်ဇာတ်လမ်းကဒါဘဲဆိုတော့ငါအိမ်သာ မပြေးရတော့ဘူး” ဆိုပြောလို့ ဝိုင်းရီပြီး စိမ့်က”နင့်ဖုန်းထဲကအောကားကြည့်ပြီး သွားပွတ်ပေါ့ဟာ” လို့ပြောသည်။ သူသူက “စိမ့်ရယ်ကြည့်လွန်လို့ထပ်သလဲလဲဖြစ်နေလို့ဖီးလ်မလာပါဘူး ဟယ်” လို့ ပြောလိုက်သည်။ “ကဲပါ နင့်ဖုန်ဇာပြာဖွင့်လိုက်-ငါခိုးရိုက်ကားတွေဒေါင်းထားတယ်-ပေးမယ်” လို့ ဖြူကပြောပြီး ကူးပေးလိုက်တော့သည်။ မိန်မပျိုတွေစုမိတိုင်းလည်း ယောကျာ်းတွေအတိုင်း ပါလားနော်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged စကီ လေးဖျော